တရုတ်ဂဟေဆော်စက်၊ DC ဂဟေစက်၊ AC ဂဟေစက်၊ ဂဟေမျက်နှာဖုံး၊ ဂဟေဆက်စပ်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ | Boda
Hole Saw အမျိုးအစား
Drill Bits နှင့်စည်အမျိုးအစား
Blade အမျိုးအစား & ကြိတ်ဘီးအမျိုးအစား
Multifunctional Tool Sets အမျိုးအစား၊ Socket အစုံ၊ Tool Set၊ DIY Tools Set
အန္တရာယ်ကင်းသော၊ မီးခံနိုင်သောသံမဏိ၊ လက်ဗွေကုဒ်သော့ခတ်ခြင်း၊
ထောင့်ကြိတ်စက်၊ သက်ရောက်မှုလေ့ကျင့်ခန်း၊ သံတူ၊ လီ-ion လေ့ကျင့်ခန်း၊
လျှပ်စစ်တိပ်၊ လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုထောက်ပံ့သောတိပ်၊ PVC တိပ်ခွေ၊
ဂဟေဆော်စက်၊ DC ဂဟေစက်၊ AC ဂဟေစက်၊ ဂဟေမျက်နှာဖုံး၊ ဂဟေဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
PVC မိုးရွာရွာစွန့်စားမှုအထည်, PE မိုးရွာရွာဒဏ်ခံအထည်, ထရပ်ကားအဖုံး
Padlock, တုပကြေးနီသော့ခတ်, သံမဏိသော့ခတ်, အရွက်သော့ခတ်, anti- ခိုးယူသော့ခတ်, password ကိုသော့ခတ်, လက်ဗွေသော့ခတ်နှင့်အခြားသော့ခလောက်
Chain၊ lifting chain၊ သွပ်သွင်းခြင်းသံကြိုး၊ သံမဏိကွင်းဆက်၊ အမျိုးမျိုးသောသတ်မှတ်ချက်များ
ပူပြင်းအရည်ပျော်ကော်သေနတ်၊ လျှပ်စစ်သံကော်သေနတ်၊ လေကောင်းလေသေနတ်၊ ပလပ်စတစ်ဂဟေဆက်၊ သံဖြူ
ဂျက်၊ အလျားလိုက်အပေါက်၊ ဒေါင်လိုက်ပေါက်၊ ဂျက်၊
အိမ်သုံးကိရိယာအစုံ၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာ၊ ကားပြင်ဆင်ခြင်းကိရိယာ၊ DIY to ...
Dual ရည်ရွယ်ချက်လိမ်ဖဲ့ခြင်း, ratchet dual-ရည်ရွယ်ချက်လိမ်ဖဲ့ခြင်း, mo ...
စိန်ဖြတ်တောက်ခြင်းဓါး, စိန်လွှင့်ဓါး, ကြွေ tile ကို ...
လျှပ်စစ်သံတူ၊ လျှပ်စစ်ထည်စည်၊ SDS, Max, He ...
Twist လေ့ကျင့်ခန်း, သံမဏိတူး bit, သံမဏိလေ့ကျင့်ခန်း ...
လျှပ်စစ်သံတူ၊ ကွန်ကရစ်တူးခြင်း၊ SDS၊ ...
ဆောက်လုပ်ရေးတူး, multi- အလုပ်လုပ်တဲ့အလွိုင်းတူး ...
TCT အပေါက်ဖောက်ခြင်း၊ အပေါက်ဖောက်ခြင်း၊ သံမဏိအပေါက်ဖောက်စက်၊ ဘိလပ်မြေ ...
HSS အမြှေးပါး၊ သံပေါက်လွှ၊
သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်သည့် Bi-Metal Hole လွှင့်စက် ၄၂၊
လျှပ်စစ်ဂဟေစက်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအဆက်အသွယ်ရှိသောအရာဝတ္ထုများကိုပေါင်းစပ်ရန်အတွက်အပြုသဘောနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာကြားရှိချက်ချင်းတိုတောင်းသောဆားကစ်မှထုတ်ပေးသောအပူချိန်မြင့်မြင့် arc ကို အသုံးပြု၍ ဂဟေဆော်ထားသောပစ္စည်းနှင့်ဂဟေဆော်ရန်ပစ္စည်းများကိုပေါင်းစပ်ရန်ဖြစ်သည်။
၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီး၎င်းသည်စွမ်းအင်မြင့်ထရန်စဖော်မာဖြစ်သည်။ ဂဟေဆော်စက်ကို output ပါဝါအမျိုးအစားအရနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။ တစ်ခုမှာ AC power supply ဖြစ်ပြီး၊ နောက်တစ်ခုမှာ DC power supply ဖြစ်သည်။ သူတို့က inductance နိယာမကိုအသုံးပြုသည်။ inductance သည်ဖွင့်သောအခါပိတ်ခြင်းနှင့်ကြီးမားသောဗို့အားပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းပေါ်ရှိဂဟေဆက်မှုကိုအရည်ပျော်စေရန်အပြုသဘောနှင့်အနုတ်လက္ခဏာတိုင်များကြားရှိချက်ချင်းတိုတောင်းသောဆားကစ်မှထုတ်ပေးသောမြင့်မားသောဗို့အား arc ကိုအသုံးပြုသည်။ အက်တမ်နှောင်ကြိုး၏ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်။
လျှပ်စစ်ဂဟေစက်များကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ ဂဟေဆော်စက်သည်ကြီးမားသောသင်္ဘောတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စက်မှုနှင့်သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းများနှင့်အမျိုးမျိုးသောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်ဂဟေဆော်စက်ကိုပစ္စည်းဂဟေဆော်ရန်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းကိုလျှပ်စစ်တွင်အသုံးပြုသည်။
အထူးသဖြင့်အချို့သောသေးငယ်သည့်ဆောက်လုပ်ရေးယူနစ်များသည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန်အတွက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနည်းသောလျှပ်စစ်ဂဟေစက်များဝယ်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၏ကြမ်းတမ်းသောပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အသုံးပြုသောအခါ၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံမှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုလုံခြုံမှုကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောလျှပ်စစ်ရှော့ခ်၊ မီးနှင့် desoldering ဖြစ်ပေါ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ဂဟေဆော်သောအရည်အသွေးကြောင့်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းပြိုကျနိုင်သည်။
DC ဂဟေစက်၏အားသာချက်များ - အရေးအကြီးဆုံးမှာ arc ဂဟေဆော်ခြင်းတွင် arc သည်အတော်အတန်တည်ငြိမ်မှုရှိသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လက်ရှိလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသည်သုညအမှတ်မဟုတ်သောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်သေးငယ်သောလျှပ်စီးကြောင်းအောက်တွင် arc လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီးအခြေခံအားဖြင့်ဂဟေဆော်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဂဟေဆော်နိုင်မှုသည်ကြီးမားပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်စွမ်းအင်ချွေတာသည်။ DC ဂဟေစက်၏အားနည်းချက်များ - DC သည်ဘက်လိုက်မှုကိုလွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်လက်ရှိလွန်းလွန်းလှသည်။
AC ဂဟေဆော်ခြင်း၏အားသာချက်များမှာ - ပထမအချက်မှာ၊ arc ကိုဘက်လိုက်ရန်မလွယ်ကူပါ၊ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် AC ဂဟေစက်၏အထွေထွေ circuit သည်ရိုးရှင်းပြီးပျက်ကွက်မှုနှုန်းမှာအတော်အတန်နည်းသည်။ AC ဂဟေဆက်စက်၏အားနည်းချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်ကြီးမားပြီးကြီးမားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ထရန်စဖော်မာ၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည်ကြီးမားပြီးစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုမှာကြီးမားပြီးတစ်ဆင့်ချင်းထည့်သွင်းမှုသည်ပါဝါဇယားကွက်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။
BOSENDA သည် DC ဂဟေနှင့် AC ဂဟေဆော်ခြင်းမှဂဟေဆော်စက်အမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဂဟေဆော်စက်ကိုလည်းစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM နှင့် ODM နှစ်ခုလုံးကိုလုပ်နိုင်သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားမေးမြန်းပါ။
ရှေ့သို့ လျှပ်စစ်တိပ်၊ လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုထောက်ပံ့သောတိပ်၊ PVC တိပ်ခွေ၊
နောက်တစ်ခု: PVC မိုးရွာရွာဖောင်ဒေးရှင်း၊ PE မိုးရွာသောအထည်၊ ထရပ်ကားအဖုံး
Woodcutting router-bits, stright shanks, woodwork ...
သံလိုက် screw ကိုနည်းနည်း, ဝက်အူလှည့ bit နဲ့, ဦး ခေါင်းဝက်အူ ...
Twist လေ့ကျင့်ခန်း, သံမဏိတူး bit, သံမဏိd...
လိပ္စာ: တရုတ်ပြည်၊ ကျီကျင်းပြည်နယ်၊ Yiwu မြို့၊ တတိယထပ်၊ ၃၃ ထပ်၊ မြောက် Chouzhou လမ်း၊
တနင်္လာနေ့ - စနေနေ့၊